सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट बन्न नसकेपछि व्यवसायी, इटहरीको सेन्ट्रल प्लाजाका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठको रोचक कथा
इटहरीः पूर्वकै सुन्दर शहर इटहरी अनि इटहरीको पनि सुन्दरता र केन्द्रविन्दु हो इटहरी चौक । इटहरी चौक पुग्ने जोकोहीको आँखा पनि झट्ट जान्छ पूर्वपट्टि लमतन्न उठेको दश तले भवनमा । दायाँबायाँ पार्किङ्ग भुइँतलामा पनि पार्किङ्ग, दिनरात भवनको सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी । यही त हो सुविधा र सुरक्षा भन्नु पनि । जिज्ञासा थियो यस्तो भवन यो शहरमा कसले बनायो होला ? यस्तै जिज्ञासाकै बीचमा इटहरी चौकमै सेन्ट्रल मार्ट नामको डिपार्टमेन्ट स्टोर खुल्यो । उद्घाटनमा हजारौँलाई निम्ता दिँदै खुलेको डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि यहि १० तले भवन सेन्ट्रल प्लाजाकै ग्राउण्ड फ्लोरमा खुलेको छ ।
अत्याधुनिक सुविधा सहितको संरचनाका निर्माता अर्थात् लगानीकर्ता रहेछन् राजेश श्रेष्ठ । हामीले हाम्रा पाठकवर्गको जिज्ञासा र कौतुहलता मेटाउन राजेशसँगै बसेर कुराकानी गर्ने निर्णय गर्यौँ । सेन्ट्रल मार्ट उद्घाटन भएको भोलिपल्ट राजेशले हामीलाई सेन्ट्रल प्लाजाको छैटौँ तलामा रहेको होटल बरण्डामा स्वागत गरे । तेह्रथुम जिल्लास्थित हालको म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिकामा २०१३ साल भाद्र महिनाको १३ गते जन्मिएका रहेछन् राजेश । राजेशका बुवा १ वर्षको हुँदै हजुरबुवाको देहान्त भएकाले राजेशका बुवाले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको रहेछ । हजुरआमाले माइतमै लगेर एक वर्षको छोरालाई हुर्काउने गरेकी रहिछन् । राजेशका बुवाको विवाह पनि मावली घरमै हँुदा भएको रहेछ, अनि तेस्रो सन्तानको रुपमा राजेश जन्मिएका रहेछन् । बुवाले पढ्न नपाएको कारणले पनि धेरै दुःख खेप्नु परेको राजेश सुनाउँछन् । एक्लो नातिका रुपमा राजेश हजुरआमासँगै बसेका रहेछन् लामो समयसम्म । राजेशका बुवा आसाममा गएर आरा काट्ने काम पनि गरेका रहेछन् । आसामबाट फर्किएपछि धरानमा २ बिघा जग्गा किनेर राजेशका बुवा आमा दुवै धरान आएका थिए रे तेह्रथुमबाट ।
पछि बुवाले मोरङ्ग जिल्लाको महेश्वर झोडा अहिलेको सुन्दरहरैचाँ नगरपालिकामा झोडा फाँडेर परिवारलाई बोलाएछन् । जब राजेश बाबा आमा चिन्ने उमेरका थिए त्यतिबेला सम्म आमा चिनेका थिएनन् । पछि २०१८ राजेश ५ बर्षको हुँदा पहिलो पल्ट आमालाई चिनेको अनुभव छ उनीसँग । त्यतिबेला आमाले आफूलाई काखमा राखेको र मोही खाएको राजेश भुल्नै सक्दैनन् । त्यसपछि फेरि राजेश तेह्रथुम नै गएछन् र त्यहीँको धुलेपाटि स्कुलमा ६ महिनासम्म पढेका रहेछन् । त्यति बेलाको पढाइ तमसुक लेख्न जानेपछि सकिएको मानिँदोरहेछ । राजेशले धुलेपाटि स्कुलबाट मात्रासम्म जानेका थिए रे । २०२० सालमा राजेश आमाबुवासँगै बस्नेगरी तराई आएछन् र अहिलेको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका ६ मा जङ्गल फाँडेर बस्न थालेछन् । त्यति बेलासम्म आफूले नपढेपनि छोरालाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेत खुलेको रहेछ राजेशका बुवाको । त्यतिबेला बुवाहरुकै पहलमा सुन्दरहरैचाँमा खुलेको ज्योति प्राथमिक विद्यालयमा राजेशले ५ कक्षा सम्मको अध्ययन पूरा गरेछन् । पछि धरानको पब्लिक स्कुलबाट कक्षा ६ बाट पढाइ सुरु भएको रहेछ । आफूले सुन्दरहरैँचाकै साजिलाल उच्च माविबाट एसएलसी सकाएको राजेशले सुनाए ।
एसएलसी पछिको अध्ययन भने महेन्द्र मोरङ्ग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा भएको रहेछ राजेशको स्नातकसम्म । २०३५ सालमा स्नातक गरेपछि एक्लो छोरा पढेपछि जागिर खानुपर्छ भन्ने भएको रहेछ राजेशलाई । जागिरको प्रयास गरेपनि भाग्यले साथ नदिएको राजेश सुनाउँछन् । नेपाली सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा छनौट भएर काठमाडौँमा फाइनल छनौटमा गएका राजेश आफ्नो भनसुन गर्ने मान्छे नहुँदा छनौटमा नपरेको बताउँछन् । हुन त त्यतिबेला स्नातक गरेका राजेशले जागिरमा खासै चासो नदिएका पनि होलान् । स्नातकोत्तर गर्न काठमाडाँैमा भर्ना नपाएका कारण पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न थालेछन् । जीन्दगी कहाँ सहजै चल्छ र ? दुख र संघर्षको साटासाट गर्न पनि एउटा जीवनसंगीनी जोड्नुपर्छ । त्यसै भएछ राजेशलाई पनि । उनले पनि २०३६ सालमा विवाह गरेका रहेछन् । विवाह गरेपछि कृषि प्रधान देशको नागरिक कृषिमा पनि सम्भावना छ भनेर हाते ट्याक्टर किनेर खेति पनि गरेछन् राजेशले । तर भनेजस्तो र सोचेजस्तो नाफा देखिएनछ । आफ्नो परिश्रम र खेताला खर्चसमेत नउठेपछि विकल्पको खोजीमा लागेका रहेछन् उनी ।
उनले विकल्प खोजेकै बेला जुट विकास कार्यालयले सलकपुरमा जुट खरिद केन्द्र खोलेको रहेछ । अनि त्यहाँका साथीहरुले गाउँबाट किनेर ल्याउने आग्रह गरेपछि राजेशले जुट किनेर खरिद केन्द्रमा लगेर बेच्न थालेछन् । जुट बेचेर एक महिनामा ६ हजार कमाएको सम्झना अझै छ यी अग्रणी व्यवसायीलाई । त्यतिबेला ६ हजार रुपैयाँ निकै ठूलो महत्व बोकेको पैसा थियो । त्यसले राजेशलाई हौसला दिएछ । केही समय जुटको काम गरेपछि उनले इटहरीमा धानचामलको काँटाको व्यवसाय सुरु गरेका रहेछन् । धान चामलको व्यवसाय राम्रो फस्टाएपछि २०५८ सालमा राजेशले मोरङ्गको गछियामा चिउरा, चामल, भुजा उत्पादन गर्नेगरी कोशी फुड प्रोडक्ट्स नामको मिल सुरु गरेका रहेछन् । त्यतिबेलादेखि तय गरेको उनको कोसी फुड प्रोडक्टसको यात्रा अहिलेसम्म पनि जारी नै छ र राम्रो व्यापार गरिरहेको छ कोसी फुडले । भएर हो या त नभएरै हो आफूले व्यावसायिक सोच बनाउँदा बुवाबाट सहयोग नपाएको राजेशको भनाइ थियो ।
“हुन त बुवाले व्यवसाय गर्नुभएकै थिएन त्यसैले पनि यसले गर्न सक्दैन भन्ने सोच्नुभयो होला” राजेश भन्दै थिए । त्यसैले पनि राजेशले आफन्तबाट २५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर व्यवसायमा होमिएका रहेछन् । इटहरीमा काँटाको व्यवासाय गर्दाकै बखत राजेशले आफूले कमाएको केही रकम लगानी गरेका रहेछन् घडेरीमा । त्यो लगानी अहिले सेन्ट्रल प्लाजा भएकै ठाउँमा थियो । २०४० सालतिर राजेशले त्यहाँ २ कट्ठा ३ धुर जग्गा किनेका रहेछन् पछि ४४ सालतिर अलिकति थपेर साढे तीन कट्ठा बनाएका रहेछन् । व्यवसायकै दौरानमा साझेदारीमा थुप्रै काम गरेका रहेछन् राजेशले । कहिले जग्गा जमिनको काम त कहिले निकासी करको ठेक्काको काम पनि गरेका रहेछन् । यस्तै क्रममा केही पैसा जम्मा भएपछि सेन्ट्रल प्लाजाको सपना देखेका रहेछन् राजेशले । अहिले प्लाजा भएकै ठाउँमा पहिले विष्णु मार्केट भनेर साना साना टहरा बनाएका थिए रे उनले । पछि टहरा भत्काएर भवन बनाउन सुरु गरेका रहेछन् २०७२ सालमा ।
पहिला ५ तलाको मात्रै बनाउने योजना रहेछ तर जग बलियो बनायो भने पछि जति चाहियो त्यति थप गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले फाउण्डेसन दह्रो बनाएको राजेशले सुनाए । मल बनेपछि एउटा सिनेमा हल पनि चलाउनुपर्छ भन्ने सोच रहेछ । पछि छोरो सिद्धार्थले यहाँ त होटल राम्रो चल्छ भनेर भनेकाले दशौँ तला बनाउन लागेको श्रेष्ठले बताए । उमेरले ६५ वर्षतिर डुल्दै गर्दा पनि युवा जोश र जाँगरमा भेटिएका श्रेष्ठ बनाएको बेला बैंकले पनि साथ दिएको र शहरको बीचमा निर्माण कार्य गरिरहन पनि समस्या हुने सोचेर दश तले भवनको काम सरासर सम्पन्न गरिएको बताँछन् । राजेशको सपनाको भवन २०७५ साल असोजमा प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट उद्घाटन भएको रहेछ । सुन्दरता र सुविधाले भरिपूर्ण बिल्डिङ्गमा अहिले सिनेफ्लेक्स सिनेमा हल, होटल बरण्डाका साथमा आफ्नै व्यवस्थापनमा रहेको सेन्ट्रल मार्ट ग्रोसरी स्टोर पनि रहेको छ । त्योबाहेक विभिन्न कम्पनी र सँस्थाहरुको कार्यालय र ३५ वटा पसलहरु सञ्चालनमा रहेको राजेश बताउँछन् ।
व्यवसायमा अग्रणी रहेका राजेश सामाजिक सँस्थामा समेत सक्रिय भएर सहभागी भएका रहेछन् । २०४३ सालमा इटहरी रेडक्रसको सहयोग संयोजक, २०५५ सालदेखि २०५७ सालसम्म नेवा पुच इटहरीको अध्यक्ष, २०६० सालदेखि इटहरीमा रहेको दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी सँस्थाको अध्यक्ष भएर १२ वर्षसम्म सँस्था हाँकेका राजेशले आफ्नै पालामा दुर्गाको भवन बनेको समेत सुनाए । त्यसका अतिरिक्त शैक्षिक क्षेत्रमा समेत राजेशले योगदान गरेका रहेछन् । इटहरीमा २०६० सालमा स्थापना भएको सुष्मा कलेजको अहिले पनि राजेश अध्यक्ष हुन् । सुष्मा केलेज अहिले आफ्नै भवनमा सरेको र एक हजार चार सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको राजेश सुनाउँछन् । नागरिक समाज इटहरीको स्थापना कालदेखिकै उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले २०६८ देखि २०७० सम्म अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका रहेछन् । आफू अध्यक्ष रहेकै बेला इटहरीको तालतलैयामा रहेको आधिकारिकता विवाद मिलाउनेदेखि लिएर इटहरी बसपार्क क्षेत्रमा सो समयमा मौलाएको यौन विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान दिएका यी व्यवसायीले त्यतिबेला तितरवितर बनेको खानेपानीको चुनाव गराउने सम्मको काम गराएका रहेछन् । अहिले नागरिक समाजको सल्लाहकार रहेका राजेश विज्ञ समुहको सल्लाहकार सदस्यसमेत हुन् ।
२ छोरी र एक छोराका पिता राजेशले ठूली छोरीलाई एमबीए सम्मको अध्ययन गराएका रहेछन् भने सानी छोरीलाई इन्टेरियर डिजाइनिङ्ग अध्ययन गराएका राजेशका छोरा सिद्धार्थ श्रेष्ठ अहिले सेन्ट्रल प्लाजाको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर हुन् । अभावमा हुर्किएका कारणले पनि संघर्ष गर्न पछि नहटेको बताउने राजेश व्यवसायमा नाफा घाटा जे भएपनि निरन्तरता दिन भने छोड्न नहुने बताउँछन् । कुनै पनि कुरामा सफलता हासिल गर्नु छ भने निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने राजेशको भनाइ छ । देखेको सपना स्थायी नहुने बुझाइ राख्ने राजेशलाई २०४४ सालमा दुर्घटना भएर आमाको देहान्त हुँदा निकै ठूलो पीर परेको रहेछ । “सबै व्यवहार आमाले सम्हालेको हुनाले कहाँ कति लिनु दिनु थियो केही भन्न नपाई आमाले छोडेर जानुभयो, त्यहाँबाट हामीलाई ठूलो दुःख भयो ।” राजेशले सुनाए ।
व्यवसाय र राजनीति फरक भएको बुझाइ राख्ने राजेशले पहिलो स्थानीय निकायको चुनावमा इटहरी वडा नम्बर १ बाट अध्यक्षको लागि चुनावसमेत लडेका रहेछन् । तर जित्न भने नसकेको उनी बताउँछन् । “राजनीतिमा जित्नको लागि झुट बोल्न सक्नुपर्छ । व्यापारीले त्यसो गर्न सक्दैन किनभने आज झुट बोल्यो भने भोलिबाट उसकोमा ग्राहक आउन छाड्छन् त्यसैले पनि राजनीति र व्यापार सँगै गर्न मिल्दैन ।” राजेश भन्दै थिए । परिश्रमबाट टाढा भाग्ने अहिलेको युवा पुस्तालाई संघर्ष गर्न हौसाउने राजेश जे गर्ने हो त्यसलाई निरन्तरता दिएर गर्न सल्लाह दिन्छन् ।
लिम्बुवान नेता वीर नेम्वाङलाई एक लाखको काङ्सोरे पुरस्कार
लन्डनः विगत चार दशकदेखि लिम्बुवान आन्दोलनको मुद्दा उठाउँदै आएका पुराना नेता वीर नेम्वाङलाई लिम्बुवान ...
धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्ग झाडु बोकेर भानु चौकमा, खैनी र भोलाका खोल टिप्दै
धरानः धरान उपमहानगरपालिकाका लागि नव निर्वाचित मेयर हर्कराज साम्पाङ्ग राई बिहिबार झाडु बोकर सरसफाईका ...
बराहक्षेत्र १० को नजरः महिला र सामु ...
बलात्कारको आरोपी इटहरीको ब्लुमिङ लो ...